चर्चित हिरोका पत्नीलाई समेत छाडेनन् रणवीर कपुरले, यस्ता छन् ६ पूर्व गर्लफ्रेण्ड - Dainik Nepal
मंगलबार, ६ कार्तिक २०७५
चर्चित हिरोका पत्नीलाई समेत छाडेनन् रणवीर कपुरले, यस्ता छन् ६ पूर्व गर्लफ्रेण्ड
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर २६ गते १४:५५
मुम्बई । प्रेम र गर्लफ्रेण्डको मामिलामा बलिउडका चकलेटी अभिनेता रणवीर कपुर धेरै अगाडि छन् ।
भर्खरैमात्र भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनका प्रेम प्रसंग र पूर्व गर्लफ्रेण्डहरुको बारेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । जसमा रणवीरले आफ्नै सहकर्मी (बलिउड अभिनेता)का श्रीमतीसँग समेत डेट गरेको भेटिएको छ ।
हिरोकी पत्नीदेखि भर्खरै ब्रेकअप गरेकीकट्रिना कैफसम्म यस्ता छन् उनका ६ पूर्व गर्लफ्रेण्डः
अवंतिका मलिक खानः अवंतिका बलिउड अभिनेता इमरान खानकी पत्नी हुन् । पहिला रणवीर कपुरसँग उनी रिलेशनसिपमा थिइन् । दुबै कैयौ पटक एक साथ देखिएका थिए । उनीहरुबीच लामो समय डेट चलेको बताइन्छ ।
दीपिका पादुकोणः रणबीर कपुर र दीपिका पादुकोणको सम्बन्ध पनि निकै सम्वेदनशील थियो । दुबै एकसाथ सुन्दर जोडीको रुपमा देखिन्थे । फ्यानको मनमा दीपिका र रणबीरका लागि अलग्गै स्थान थियो । तर, किस्मत (भाग्य)लाई अरु कुनै मान्य थियो जसका कारण दुबैको ब्रेकअप भयो । दीपिका अहिले बलिउडका अर्का अभिनेता रणवीर सिंहसँग रिलेशनसिपमा छिन् ।
सोनम कपुरः सोनम कपुर र रणबीर कपुरले फिल्म ‘सवारिया’बाट एकसाथ डेब्यु गरेका थिए । र, दुबैले सञ्जयलिला भन्सालीको फिल्म ‘ब्लैक’मा असिस्ट पनि गरेका थिए । त्यसक्रममा दुबै निकै नजिक भएका थिए । यद्यपी दुबैले यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । र, बीचमै ब्रेकअप भयो ।
नर्गिस फाखरीः नर्गिस फाखरीसँग फिल्म ‘रकस्टार’को शुटिंगका क्रममा रणवीर कपुर नजिकिएका थिए । यद्यपी औपचारिक रुपमा सम्बन्धलाई दुबैले अस्वीकार गरिरहे । र, यिनीहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकेन ।
नंदिता महतानीः नंदिता महतानीसँग रणवीर कपुरको सम्बन्ध लामो समयसम्म रह्यो । गाडी दिनु मोरया नामका व्यक्तिसाग नंदिताको रिलेशनसिप विग्रिएका बेला रणवीरले इन्ट्री मारेका थिए । नंदितालाई रणवीरसँग धेरैपटक देख्न पाइएको थियो । यद्यपी नंदितासँग पनि उनको सम्बन्ध धेरै टिकेन ।
कट्रिना कैफः पछिल्लो समय कट्रिना कैफसँग लामो समयसम्म रणवीरको अफयेर चलिरह्यो । बीचमा ब्रेकअप समेत भएको खबर आयो । तर, दुबैले ‘जग्गा जासुस’ नामक फिल्म संगै अभिनय गरेर सम्बन्ध सुमधुर रहेको देखाए ।
हुनेवाला पतिभन्दा यी अभिनेत्री दोब्बर धनी
यी हुन् गायिकाहरूसँग यौनसम्बन्ध राख्ने चर्चित संगीतकार, बाहिरियो कर्तुत
प्रियंका र निकको विहे मिति तय, जाेधपुरमा भव्य तयारी
सुपरहिट गीतका ह्याट्रिक गायक
शीलत निवासको एउटा तस्बिरले राष्ट्रपतिको जमेर आलोचना
वृद्धभत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी
ओलीलाई कांग्रेसको साथ, आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न खोज्ने मुख्यमन्त्री राउत चौतर्फी घेराबन्दीमा
सांसद बन्न नपाएका वामदेव के गर्छन् आजकाल भैँसेपाटीमा ?
जागिर खुस्कने भएपछि एसपी डिल्लीराज बिष्टले दिए विवादास्पद बयान (भिडियो)
निर्मला हत्याकाण्ड : पतिलाई जोगाउन पत्नी आइन मैदानमा
विद्युतीय बस सेवा शुरु, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन
एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक शर्मा कतारमा पक्राउ
विद्या कसम, अरुले घुँडा टेक्ने हिम्मत गर्दैनन्
यी भीभीआइपीले चन्दा र दानबाट बनेको भवनमा आँखा लगाएपछि…
निर्मला हत्याबारे के भन्छन् रोशनी र बबिता बम दिदीबहिनी ? (भिडियो)
पूर्ण रुपमा हट्यो कपिलवस्तुमा लगाइएको निषेधाज्ञा
सरदर आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउने योजना आयोगको लक्ष्य
स्मार्ट लाइसेन्स् छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई
साफ यू–१५ फुटबल प्रतियोगिता बुधबारदेखि शुरु हुँदै
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू